किन ऋषिपञ्चमीमा कर्कलो खाइन्छ ?
समाचार जीवनशैली स्वास्थ्य
किन ऋषिपञ्चमीमा कर्कलो खाइन्छ ? हृदयाघात हुनबाट बचाउँछ, तौल बढ्न दिँदैन
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, १७ भदौ
हिन्दू नारीको ठूलो चाड तीजको तेस्रो दिन अर्थात् ऋषिपञ्चमीका दिन कर्कलोको तरकारी खाने प्रचलन छ । अघिल्लो दिन निराहार ब्रत बसेर पञ्चमीको दिन नदी किनारमा नुवाई–धुवाई गरेर पूजा अर्चना गरेपछि कर्कलोको तरकारीसँग खाना खाने गरिन्छ ।
ऋषिपञ्चमीका दिन कर्कलो नै खानुपर्ने जबरजस्त धार्मिक मान्यता छैन । यद्यपि, सुइरो भएर उम्रिएका कन्दमूल सेवन गर्दा राम्रो हुने कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ ।
नुहाई–धुवाई र पूजाआजापछि शुद्ध कन्दमूल खाने मान्यताकै आधारमा कर्कलोको तरकारी खाने चलन सुरु भएको जानकारहरु बताउँछन् । धार्मिक मान्यतासँगै कर्कलोको तराकारी खानुका थुप्रै फाइदा छन् ।
चिकित्सक अरुणा उप्रेतीका अनुसार कर्कलोमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइन्छ । सँगै क्याल्सियम, भिटामिन ए, सी, के लगायत शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्व पाइन्छ ।
‘अघिल्लो दिन ब्रत बसेकी नारीले भोलिपल्ट कर्कलो खाँदा स्वास्थ्यलाई आवश्यक धेरै पौष्टिक तत्व एउटै तरकारीबाट पाइने भएकाले कर्कलो खाने चलन चलेको हुनुपर्छ’ उप्रेतीले भनिन्, ‘ऋषिपञ्चमीका दिन मात्रै होइन, अघिपछि पनि कर्कला खाँदा स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ ।’
चिकित्सकहरुका अनुसार कर्कलो खाने हो भने रक्त अल्पताबाट बच्न मद्दत पुग्छ । बाहिरका बट्टा र प्याकेटका कुहिएका खानेकुराभन्दा कर्कलो र पिँडालुको तरकारी प्रयोग गर्नु धेरै राम्रो हो ।
चीन, ब्राजिल, ताइवान, बंगलादेश र अफ्रिकामा पनि कर्कलो खाने चलन छ । दक्षिण अमेरिका, कोस्टारिका, निकारागुवा, पनामा, जस्ता देशमा सुप बनाएर खाइन्छ । कतिपय ठाउँमा कर्कलोको जरा अर्थात पिँडालुलाई आलुको सट्टा प्रयोग गरिन्छ । युरोपमा रोमन समयताकै पिँडालु कसरी पकाएर खाने भनेर किताबमै लेखिएको थियो ।
हृदयाघात हुनबाट बचाउँछ, तौल बढ्न दिँदैन
कर्कलोमा कम फ्याट र सोडियम हुन्छ । र, पोटासियम भने अत्यधिक हुन्छ । यहीं कारण यो उच्च रक्तचाप भएका ब्यक्तिका लागि अतिउत्तम मानिन्छ । यसमा भएको फाइबर र कार्बोहाइट्रेडले रक्त प्रबाहलाई सरल बनाउछ र तनाबलाई पनि घटाउछ । जसले हृदयाघात हुनबाट बचाउँछ ।
कर्कलोमा हुने भिटामिन सि,ए र फेनोलिक एन्टिअक्सिडेन्टले क्यान्सरजन्य तन्तुहरुलाई निकालेर फ्याक्न मद्दत गर्छ र फेरि बढ्न दिदैन । त्यस्तै कर्कलोले तौल बढ्न दिँदैन ।
तर, घुँडा दुखाइको समस्या भएका मानिसले कर्कलो र पिँडालु कम खाएकै वा खान छाडेकै ठिक हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १७, २०७६, ०९:४१:००